Maitiro Ekutora Yako YeMurume Kutarisisa Kana Iwe Wakaneta KuKumbira Izvo - Ukama
Maitiro Ekuti Uitwe Nemurume Wako Kutarisisa Kana Wakaneta Kuzvikumbira Izvo
Iwe unonzwa here kuti hausi kuwana kutarisisa kwakakwana kubva kumurume wako?
Izvi zvinogona kukuita kuti unzwe sekunge urikuregeredzwa, kana kuti uri kuve chikamu chemidziyo, pane kudiwa, kukudzwa, uye kudiwa.
Ngatitarisei dzimwe nzira dzakanaka, dzakanaka dzekutaura nyaya iyi. Ndinovimba tinokwanisa kuona chakakonzera, nekushandura zvinhu.
1. Taura naye.
Chinhu chakakosha kurangarira ndechekuti pane vanhu vaviri muhukama uhu. Saka nekudaro, pachave nekusawirirana kwekutaurirana uye zvisirizvo nguva nenguva
Mumwe munhu anogona kunzwa sekunge asiri kuwana kutariswa kwakakwana kubva kune waakaroorana naye, nepo mumwe wacho angave asiri kuwana yakakwana nguva yega.
Saka uyo ari kunzwa kusiiwa angangosundira kwenguva yakawanda pamwe chete, izvo zvinoita imwe unzwe kupwanyika . Izvi zvichaita kuti vadzokere mberi zvakanyanya, zvichingodaro.
murume wangu anondida here
Sezvaunogona kufungidzira, mhando iyi yemhepo inongoita kuti zvinhu zviwedzere mumativi ese.
Kutaurirana kwakakosha chose, saka iva nechokwadi chekutaura nemurume wako nezve manzwiro auri kuita.
Edza kusava anopomera. Panzvimbo pekutaura zvinhu zvakaita sekuti, 'hausi kundipa kunyatsoteerera,' kana, 'urikundisundira kure,' shandisa kwazvakarerekera kana 'ini' zvirevo pachinzvimbo, pamwe nemibvunzo inogona kubatsira kukurudzira kumwe kutaurirana.
“Ndakaona kuti hatina kupedza nguva yakawanda tiri pamwe chete nguva pfupi yadarika. Icho chinhu chaungade kuchinja here? Kana kuti unoda nguva wega wega izvozvi? ”
'Ndanga ndichinzwa kusuruvara kuti hatisi kudanana semataurirwo ataiitwa. Muri kunzwawo saizvozvo here? ”
Nokushandisa nzira iyi, murume wako haazonzwi kurwiswa. Panzvimbo pekuzvidzivirira, anozokwanisa kuratidza zvaari kunzwa, nekuti arikusvikwa nerudo uye neruremekedzo.
Tarisa pamufananidzo muhombe.
Kazhinji kazhinji, apo vanhu vanonzwa kuti havasi kuwana kutarisirwa kwakaringana, ivo vanonangidzira kukuvadzwa kwavo vamene. Ivo vari kunzwa kurambwa, kusuruvara, kana kusurukirwa, saka ivo vanongofunga chete kuti vakashata sei ivo vari kunzwa. Ivo vanoda kuita kuti kukuvara kumire. Kupera kwe.
Izvi zvakangofanana nemabatiro anoita vanhu kana vachinge varwara. Vazhinji vanoda kungotora mushonga kuti hurwere hunyangarike, saka zvinhu zvinogona kudzoka pane zvakajairwa zvakare.
Maitiro anobudirira zvakanyanya ndeyekuziva chinokonzera chirwere ichocho. Panzvimbo pekungorapa kana kuvhara zviratidzo, zvirinani kuti uzive kwazviri kubva. Nenzira iyoyo inogona kurapwa kwayakabva, chaiko?
Zvimwe chete zvinoenda kune hukama.
Iwe unganzwa uchinetseka nemanzwiro ako pachako izvozvi, uye izvo zvakanaka. Hapana munhu ari kukukumbira kuti uregeredze kana kushayisa basa izvo zvachose. Nyora pamusoro pavo kana izvozvo zvichibatsira, kuve nekuchema kwakanaka kuti usunungure kumwe kunetseka, enda unofamba.
Zvino, kana iwe wagadzirira, edza kukwevera kutarisa kwako kure kure kuti iwe ugone kuona mamiriro acho ese. Funga nezve izvi sekucherekedza machira panzvimbo yekutarisa pane imwechete tambo.
Paive nekumwe kuchinja kukuru muhupenyu hwako nguva pfupi yadarika? Chii chiri kuitika muhupenyu hwemurume wako, iwe pachako, izvo zvinogona kunge zvichinyengera muhukama hwako?
Basa rake riri kufamba zvakanaka here? Akaratidza kushushikana nezve chero chinhu? Anowanzoora mwoyo kana kuzvidzora here?
Rangarira kuti varume havaite basa kana kuratidza manzwiro avo nenzira inoita vakadzi. Muchokwadi, ivo vanowanzo buda kuitira kuti vagadzirise zvinhu zvavo vega.
Izvo iwe zvaungave uchidudzira sekusiri kukupa iwe zvakakwana kutarisisa kungave kuri kuti ari kutambura, uye kuyedza kusakuremedza iwe.
Kushushikana pabasa, mabasa emhuri, uye zvimwe zvakasiyana shanduko zvese zvichave nemhedzisiro mune zvimwe zvese zvehupenyu hwedu. Kana tichifanira kutarisisa kutarisa kwedu munzira dzinoverengeka, vatinoshanda navo vangangotadza kuwana chaiyo yakaenzana yekutarisisa yavakajaira kugamuchira.
Zvekare, ingotaura naye. Tsvaga zviri kuitika.
3. Akanyura muzvinhu zvake here? Anoda kuzviita pamwe chete here?
Chimwe chezvikonzero chinoita kuti vanhu vafunge kuti vavakaroorana navo havasi kuvapa kutariswa kwakakwana ndopaya apo vavakaroorana navo vanongoerekana vatora zvekuvaraidza kana zvido.
Kamwe kamwe, panzvimbo pekushandisa X maawa newe, murume wako anogona kunge ari mugaraji, musangano, gadheni, kana studio yehunyanzvi.
Kana aya ari mamiriro ezvinhu, zvakare zvakare zvinhu zvinodzika mukutaurirana.
Anogona kunge akanyura mune iyi hobby nyowani, iri kumuita kuti afare kwazvo, zvekuti haana kuziva kuti anga achiregeredza kwauri.
Zvingamushamisa kuti azive kuti hausi kana kufara! Kunze kwekunge tataura manzwiro edu kune vamwe, ivo kazhinji havana zvachose ruzivo rwezviri kuitika mukati medu misoro.
Ichi chiitiko chitsva here kana kutsvaga chinhu chinokufadza futi? Kana zvirizvo, zvakanaka! Mubvunze kana angave achifarira iwe uchiita zvimwe zvacho pamwe chete. Kwete zvakanyanya zvekuti zvinokanganisa nguva yake ega, asi zvakaringana zvekuti unonzwa sekunge iwe unobatanidzwa muzvinhu zvake.
Neimwe nzira, kana zvido zvake zvikakusvimha misodzi kana kuti hazvisi zvako, mubvunze kana uchigona kupa husiku hushoma pasvondo kuti uite zvinhu pamwe chete.
Nenzira iyoyo, iwe unenge usiri kukanganisa nguva yake nezvinodiwa zvekutarisirwa, uye anogona kuve nechokwadi chekubata nzvimbo muchirongwa chake kuti ave nechokwadi chekuti waanoda anokudzwa nenguva yake.
Paunenge uri pazviri, funga kutora zvimwe zvekuvaraidza kana zvekuita zvako wega. Tsvaga muzvidzidzo kana zviitiko zvaunoda, uye haunzwe sekuda kwekutarisirwa kwevamwe vanhu.
4. Zvinhu zvakashanduka rini uye nei?
Cherekedza nezve kuti riini uye nei hukama hwakachinja. Zvakaitika here kubva pasina? Kana pane chimwe chinhu chakaitika chakachinjisa simba richienda kune imwe nzira?
Semuenzaniso, vamwe vavakaroorana vane rudo rwepamusoro uye vanotamba panguva yechikamu chekutanga chehukama, asi vobva vadhonza kana vanyatso roora.
Hukama hunochinja mushure mekutanga kutumbuka kwerudo uye nguva yehusiku, uye vamwe vanhu vanonzwa sekunge havafanirwe kuisa simba rakawanda kana mhete yavepo, sekutaura.
Ndeupi mamiriro azvino ehukama hwako?
Zvinhu zvave kufamba mushe mushe, kana imi vaviri mave muchikakavadzana zvakanyanya?
Ratidza kuti pane chimwe chinhu chiri kumukonzeresa kuti abve, kana kutendeudzira pfungwa dzake kumwe kunhu.
Ive neshuwa yekutarisa maitiro ake zuva nezuva. Ari kuisa kupi pfungwa dzake apo asiri kukupa iwe?
Semuenzaniso, kana muchipedza nguva pamwe chete muchiona firimu, ari kushandisa yakawanda yenguva yake parunhare here? Kana zvirizvo, edza kumbomira zvauri kutarisa uye kumubvunza kana akasarudza kuona chimwe chakasiyana.
Iwe unogona kuita hunyoro kucherechedza kuti haaratidzike kunge ari mazviri, uye wozomubvunza kana iye angave ari kuita chimwe chakasiyana pachinzvimbo.
Rangarira kuti vazhinji vedu tinoshivirira zvinhu zvatisiri kunyanya kupinda nekuti vedu vatinonamata vanozvifarira. Asi izvi hazvireve kuti tinogona kuvanza manzwiro atinoita nezvazvo.
Iwe ungangoda kutarisa Rudo, Chaizvo cheiyo 50th nguva nekuti iwe unonyatsoda iyo firimu uye kuti inoita sei kuti unzwe. Anogona kuzvidza iyo bhaisikopo, asi anozoiona newe nekuti anokuda uye anoziva kuti inokuita kuti ufare. Asi iye anonzwa kudiwa kwekuzvitsausa panguva yemufirimu, uye iwe unodudzira zvisizvo sekusiri kukupa iwe mhando yekutarisisa yaunoda panguva iyoyo.
Kurwa kwakawanda kunouya mukusanzwanana uye kusanzwisisana. Kurukurai zvinhu naye, uye tsvagai pakati pekugara munogona kunakidzwa mose.
Pamwe pachinzvimbo chekugara uye kungogara uchiona firimu, imi vaviri munogona kutamba mutambo pamwe chete. Kana zvimwe ita shuwa kuti imi mese mune zvakaenzana kutaura mumhando dzemamuvhi dzaunotarisa.
Hukama hwakanaka hunoda zvishoma zvibayiro uye zvinokanganisa kuitira kuti iyerere zvakanaka.
5. Iko kuchinjaniswa kwesimba uye kwekutarisa kwakaenzana uye kwakadzokedzana?
Mumashoko akareruka, sarudza kana imi vaviri muri kupa mumwe chete zvakaenzana rudo uye kutarisirwa, kana kana munhu mumwe ari kuda zvakawanda, uye kupa zvishoma.
Iye murume wako arikuda iwe kutariswa uye rudo rwemuviri paanenge achizvida, asizve asiri kudzorera nemutsa?
Kana zvirizvo, uku kusaenzana kunofanirwa kukurukurwa nekukurumidza sezvazvinogona. Zvakare, anogona kunge asingatomboziva izvozvo arikukutora sezvisina basa , asi ndinovimba ichagadzirisa kana yaunzwa kwaari.
Mukupesana, iva akatendeseka newe pachako nezvehunhu hwako. Chinja izvo zvakapoterera uye uone kana iwe uri kuve uchimuda uye uchimupa kwaari sezvaunoda iye kuti ave kwauri.
Kazhinji, vanhu vanoratidzira kutarisisa kwatinovapa. Kana tikaratidza rudo uye chidakadaka kune vamwe, vanozopedzisira vadzorerawo.
6. Pane chirango chiri kuitika here?
Dzimwe nguva, kana munhu achinzwa sekunge haasi kuwana yakakwana tarisiro, ivo vanozotsvaga 'kuranga' mumwe wavo nekutonhora.
Semuenzaniso, ngatitii wanga uchingoda nguva yemurume wako nekucherechedzwa, asi anga akabatanidzwa neimwe nzira.
Zvino, kana achinge apedza izvo zvaakange akabatikana nazvo, anouya uye achida kupedza nguva newe… saka unomubvisa uye woti izvozvi WAKABatikana.
Akaita kuti unzwe zvakashata nekusakupa pfungwa paunenge uchizvida, saka unodonha ropa zvakanaka kwete kumupa mukuchinjana.
… Izvo zvinomutungamira kuti aite zvimwechetezvo, uye zvese zvinotenderera kubva ipapo.
Vanhu vanoita zvavanoda, kwete zvavanoda kwavari. Pamusoro pezvo, vamwe vanhu havana chikwereti kuna ani zvake - isu tinoiisa kwatinoda nekuti tinofarira kuzviita.
Pfungwa ye 'kutora' kutariswa nemumwe munhu nekuti iwe unonzwa kuti hausi kugamuchira zvakakwana inzira isina hutano. Kana iwe ukaedza kukwezva kuburikidza nenzira dzisina kunaka, saka ndizvo zvinowanzo kuve mhando yekutarisisa iwe yauchazogamuchira ichichinjana.
Funga nezvemaitiro anoita vana kana vachinzwa sekuti havasi kuwana kutarisirwa kwakaringana. Vanozozvibata zvisirizvo nekuda kwekubata pfungwa dzemumwe munhu.
Hazvina basa kuti vari kupoperwa… ivo vari kutariswa. Uye ndizvo zvavaida.
Kana iwe uchida kuti mumwe munhu akupe zvakanyanya kutarisisa, zvakakosha kuti utarise kuti uri kusangana sei nezvavanotarisira zvepamoyo zvakare.
Ndeupi rudzi rwekutarisirwa iwe waunoda?
Iwe urikupa izvo zvakawanda zverudzi irworwo simba sezvaunoda kugashira?
Svika nyaya idzi kwadzinobva, uye kupora kunozoitika zvakasununguka.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezvekushaikwa kwekutarisa iwe kwaunowana kubva kumurume wako? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
Nzira gumi nembiri dzekubatanidzwazve Newawakaroorana Naye Paunenge Uchinzwa Kusabatanidzwa
Kana Iwe Uri Kuroora Uye Kusurukirwa, Hezvino Izvo Zvaunofanirwa Kuita
14 Zviratidzo Zvemweya Kuregeredza Muhukama
Nzira 16 Dzokudzorera Imba Yako Yemuchato Panzira
12 Matipi Ekubata Neakamanikidzwa Partner Uye Kubatsira Ivo Zorora
13 Zviratidzo Zvinosuruvarisa ZveMurume Anozvifunga (+ Maitiro Ekuita Naye)
7 Matipi Akareruka Kuti Uve Anofara Mune Yekusina Kufara Kuroora
Kana Murume Wako Asina Kubatsira Nechinhu Chero, Ita Izvi
Yemhando Yenguva Yekuda Mutauro: Iyo Yakakwana Gwara
ndinorarama zuva rimwe chete panguva
kutarisana nemurume zvinoreva
kutaura sei kana mukomana achikuda asi achihwandisa
maitiro ekuita kuti mumwe wako awedzere kudanana
mutsauko werudo uye murudo